डब्लूएचओको चेतावनी– कोरोनाभाइरसले अझै भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ Canada Nepal
काठमाडौँ। कोरोनाभाइरसको संक्रमण अन्त्य कहिले हुन्छ भन्नेमा विश्वभरका मानिसको चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । यसैबेला विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लुएचओ)ले कोरोनाभाइरसले अहिलेको अवस्था भन्दा भयावह अवस्था आउने सक्ने चेतावनी दिएको छ। संसारमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको फैलावट अझै बढ्ने भएकाले विश्वभरका मानिसले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको डब्लूएचओले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाइने सबै उपाय अवलम्बन गर्न अपील पनि गर्दै आएको छ ।
विश्वभर दैनिक रुपमा करिब दुई लाखभन्दा बढी मानिसक संक्रमित हुन थालेका बेला मंगलबार प्रेस सम्मेलनमा डब्लूएचओले भनेको छ, ‘हामीले अहिले कोरोनाभाइरसको चरमबिन्दुमा पुगेका छैनौँ, यो भाइरस अझै संक्रमणको उच्च विन्दुमा पुग्न सक्छ । पछिल्लो ५ हप्तामा केहि देशहरुले लकडाउन हटाएसँगै भाइरस अत्याधिकरुपमा संक्रमण भएको छ ।’
संगठनका डाक्टर माइकल रायनका अनुसार अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण आत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ। यदि यस्तै रफ्तारले संक्रमण बढ्ने हो भने मृत्युहुने संख्यापनि तिब्र रुपमा बढ्ने उनले बताए। संगठनले अहिले संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण धेरै समूहमा गरिएको टेस्टिङगले पनि हो, जसको कारण नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ।
आषाढ २४, २०७७ बुधवार ०८:४५:०० बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। विश्व स्तनपान सप्ताह सकिएको केहि दिन मात्र भएको छ। विश्वभर हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म साताव्यापी संसारभर विश्व स्तनपान दिवस मनाउने गरिएको छ। यो एक वार्षिक उत्सव हो जुन १२० भन्दा बढी देशहरूमा मनाइने गरिन्छ। स्तनपान गराउन र विश्वभरिका बच्चाहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न यस दिवसको मुख्य उधेश्य हो।
यस दिवसको लागी एक्यवद्दता जनाउन नेपालले पनि सन् १९९२ बाट स्तनपान, प्रसूति र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्यले थुप्रै कार्यक्रम तथा परियोजना गर्न थालेको हो। स्तनपानले आमाहरूमा स्तन क्यान्सर, डिम्बग्रंथि क्यान्सर, टाइप २ मधुमेह, र हृदय रोगको जोखिम कम गर्दछ। आमाको दुधमा एन्टिबडीहरु पर्याप्तरुपमा पाइने भएका कारण यसले च्चालाई भाइरस र ब्याक्टेरियाहरूसँग लड्न मद्दत पुर्याउदछ।
यसैगरी आमाको दुधले बच्चाको दम वा एलर्जीको जोखिम कम गर्छ। यसबाहेक, कुनै शिशुलाई लगातार ६ महिनासम्म स्तनपान गराइयो भने बच्चाहरुमा कानको संक्रमण र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, र पखाला लाग्ने जोखिम कम हुने गर्दछ।
तर, हिजोआज धेरै महिलाहरुले आफ्नो स्तनको आकार विग्रिने तथा अन्य स्तन सम्वन्धी समस्याको सामना गर्नुपर्ने डरले स्तनपान गराउने रोक्ने गर्दछन्। यदि तपाई पनि स्तनपान गराउँदा आफ्नो स्तनको आकार बिग्रिन्छ भनेर डराउनु भएको छ भने अब नडराउनुहोस। यस लेखको माध्यमबाट स्तनको कसरी ख्याल गर्ने भन्ने बारेमा केहि सुचना यहाँ प्रदान गरिएको छ।
स्तनको मालिस : बच्चालाई स्तनपान गराइसकेपछि आफ्नो स्तनलाई बेबी वाइप्सले सफा गर्नुहोस। आफुलाई फुर्सद भएको बेला आफ्नो स्तनलाई नरिवलको तेल, बेबी ओइल वा बेबी लोसनले आफ्नो स्तनलाई मालिस गर्नुहोस। तेलले स्तनलाई खुकुलो हुन दिदैन। यसैगरी, स्तानलाई बच्चाको थुप अथवा आफ्नै दुधले पनि मालिस गर्न सकिन्छ।
निप्पलमा घ्युको प्रयोग : धेरै महिलाहरुमा स्तनपान गराइसकेपछि निप्पल चिलाउने समस्या हुन्छ। यस्तो समस्याबाट बच्न आफ्नो निप्पलमा घ्युको प्रयोग गर्नुहोस। घ्युले चिलाउने पना पनि नियन्त्रण गर्छ भने निप्पल फुटेको समस्यालाई पनि हाल गर्ने गर्छ।
छातीमा भएको कपाललाई साफ गर्नुहोस् : कतिपय अवस्थामा स्तनपान गराइरहेको बेला बच्चालेहरुले छाती वा स्तनमा भएका कपालहरुलाई उखेल्ने गर्दछन। यस्तो भएमा बेला बेलामा आफ्नो स्तन वा छातीमा भएका रौँलाई हटाउने क्रीम आवधिकरूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
स्तनमा महको प्रयोग : चिकत्सकहरु बच्चालाई कम्तिमा छ महिना सम्म स्तनपान गराउने सल्लाह दिन्छन्। यसै समयमा कतिपय बच्चाहरुको दाँत उम्रिन थालिसकेका हुन्छ र कहिलेकाँही स्तनपान गरिरहेको बेला टोक्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। यस्तो बेला आफ्नो शिशुलाई आफैले गाइड गर्नुहोस, स्तनमा थोरै मह लगाई बच्चालाई अन्यत्र मुख लान नदिनुहोस्।
श्रावण २५, २०७७ आइतवार १०:०७:२४ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो दिनहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र थप ६२ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
शनिबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले आज काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं जिल्लाका ५६ जना, ललितपुर जिल्लाका ३ जना र भक्तपुर जिल्लाका ३ जना गरी थप ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४९९ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । यससँगै कोरोनालाई जितेर घर फर्कनेको संख्या १६ हजार ३ सय १३ पुगेको छ । त्यस्तै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या थप ३ जना थपिएसँगै ७३ जना पुगेको छ ।
श्रावण २४, २०७७ शनिवार १९:३६:३६ बजे : प्रकाशित
श्रावण २४, २०७७ शनिवार १९:३३:०६ बजे : प्रकाशित
कोरोना सङ्क्रमण शून्य भएका नेपालका यी ७ जिल्ला
काठमाडौँ, २४ साउन – गत २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ६२ जनासहित देशका विभिन्न जिल्लामा ३७८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आज मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले गत २४ घण्टामा कोभिड–१९ बाट तीन जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७३ जना पुगेको छ ।
श्रावण २४, २०७७ शनिवार १९:२६:४५ बजे : प्रकाशित
बिरामीले ख्याल राख्नु पर्ने यी कुराहरु - डा. कल्याण सुवेदी
१. समयमा रोग सन्चो भएन भन्दैमा डाक्टर तुरुन्त परिबर्तन नगर्नुस: धेरै रोगहरु कहिल्यै सन्चो नहुने खालका पनि हुन्छन र लक्षणहरु कम गर्ने मात्र खालका हुन्छनl कुनै रोग सन्चो हुन केहि हप्ता वा महिना लाग्न सक्छ l कुनै बेला मुख्य रोग सन्चो भएको तर सहायेक लक्षणहरुबाट सम्पूर्ण recovery हुन बेर लाग्छ l जस्तै: (भित्रि) शरीरभर infection भएर डाक्टरले २ हप्ताको लागि औषधि सुरु गरेको थियो भने औषधि खान थालेको ५ दिन पछि पनि ढाड दुखि रहेको छ, खाना रुच्दैन, शरीर निस्तागत भएर काममा वा कलेज जान नसक्ने भयो, अझै वाकव्वाक्ति हुने गर्छ भनेर फलानो डाक्टरले उपचार गरेको भएन भनेर अर्को डाक्टरमा नजानुस l बरु चित्त नबुझे पहिलेकै डाक्टरमा जानुस र कुरा गर्नुस l आंफुले बताएको लक्षण र समस्याहरु बारेमा डाक्टरले ध्यान दिंदासम्म अर्को डाक्टर परिबर्तन नगर्नुस l
२. डाक्टरकोमा जानु अघि घरमै आंफुले भन्नु पर्ने कुराहरुको list तयार पारेर लेखेर लैजानुस: कतिपय समयमा भन्नै पर्ने कुराहरु छुटेका हुन्छन l धेरै जस्तो तपाईंले बताएका लक्षणहरुका आधारमा डाक्टरले रोग पत्ता लगाउने, औषधिको अबधि निर्धारण गर्ने, emergency case हो होइन भनेर छुट्याउने गर्छन l केहि महत्वपूर्ण कुरा भन्न छुटाउनु भो भने कहिले कहीं सहि उपचार नपाउन वा ढिलो पाउन सक्नु हुन्छ l
३. खाई राखेको औषधिहरु सबै लिएर जानुस: तपाईंले खाएको औषधिको आधारमा पनि डाक्टरले तपाईंलाई पहिले अन्य के के रोगहरु लागेको रहेछ भनेर राम्रै अनुमान गर्न सक्छन l तपाईंले भन्न छुटाउनु भयो वा राम्रो संग भन्न सक्नु भएन पनि डाक्टरले आँफै पत्ता लगाउन सक्छन l कुनै बेला ति औषधिहरुको आधारमा कस्तो औषधि तपाईंलाई दिनु हुन्न र कस्तो दिनु पर्छ वा कस्तो lab test हरु गर्नु पर्छ भनेर पनि अनुमान गर्न सक्छन l
४. यदि मानसिक स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको लागि डाक्टरकोमा जान लाग्नु भएको हो भने बाबु-आमा दुवै तर्फका (रगतको नाता भएको) परिवारमा के के लक्षण छन्, के के रोग लागेको थियो र के के औषधि खाने गर्छन वा गर्थे र कुन औषधिले काम गर्यो र कुनले गरेन यी सबै जानकारी सकेसम्म धेरै बटुल्नुस: एकै खाले gene भएकाहरुलाई एकै खाले औषधिले काम गर्ने र एकै खाले औषधिले नारामो असर गर्ने निकै धेरै सम्भावना हुन्छ l यसो गर्दा उपचार गर्न अनेक थरी औषधिहरु trial गर्दै समय बर्बाद गर्नु पर्दैन l
५. डाक्टरले दिएको औषधिहरु भने जस्तै सम्पूर्ण सक्नुस: औषधिहरु, खासगरी antibiotics, केहि दिन मात्र खाँदा र सम्पूर्ण रुपमा नसक्दा जीवाणुहरु निस्क्रिय भएर तत्काल केहि राहत मिले जस्तो भए पनि ति जीवाणुहरु पूर्णरुपमा नस्ट नहुँदा पछि गएर ति जीवाणुहरु झन् बाठा, बलिया र खाइरहेको औषधिले नछुने हुन जान्छन् l अनि बुढेसकालमा आफ्नो रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति पनि क्षय हुने र दिएको औषधीले पनि काम नगर्ने भएर आपत पर्न सक्छ l नचाहिने बेलामा डाक्टरको prescription बिना pharmacy गएर antibiotic किनेर खाँदा पनि यस्तो हुन सक्छl (यस बारे बिस्तृतमा भबिस्यमा लेख्ने छु)l
६. डाक्टरलाई देखाएपछि "के रोग लागेको हो ?" भनेर सोध्नुहोस: डाक्टरसंग रोगको नाम के हो ? medical भाषामा यो रोगलाई के भन्छन भनेर सोध्नुहोस l यदि कोहि डाक्टरले "तपाईंलाई बाथ छ वा तपाईंलाई ग्यास्ट्रिक छ" भन्यो भने यो रोगको medical नाम के हो भनेर सोध्नुहोस l "तपाईंले जान्नुहुन्न गार्हो नाम छ" भन्यो भने लेखेर दिनुस भन्नुस l कहिले काहीं उपकरणको अभाबमा सम्पूर्ण कुराहरु check गर्न नपाएर अनुमानको भरमा उपचार गर्नु पर्ने हुन सक्छ l कहिले काहीं लक्षणहरु रोगको criteria संग सम्पूर्ण रुपमा मेल नखान पनि सक्छ l त्यस्तो बेलामा ठोकुवाको साथ यहि रोग हो भन्न गार्हो हुन्छ तर पनि final diagnosis नभएर working diagnosis अर्थात् तत्काल अनुमानित रोगको नाम डाक्टरले तपाईंलाई भन्न सक्नु पर्छ l
यस्तो बेलामा थप लक्षणहरु पत्ता लागेको खण्डमा वा दिएको औषधिले कत्ति पनि नछोएको खण्डमा अर्को रोगतर्फ ध्यान सारिन्छ l यदि त्यस्तो भयो भने डाक्टरले कारण सहित अर्को रोगको नाम भन्नु पर्छ l रोगको नाम थाह पाए पछि उक्त रोग बारेमा आँफै जानकारी खोजतलास गर्नु पर्छ l खासगरी दिर्घरोग हो वा निकै लामो समयसम्म औषधि-उपचार गर्नु पर्ने रोग हो भने तपाईंले रोगको बारेमा धेरै भन्दा धेरै ज्ञान हाँसिल गर्नु पर्छ l तपाईं १० कक्षा पास हुनु हुन्छ र smart phone प्रयोग गर्ने खुबी राख्नु हुन्छ भने तपाईंले आँफैलाई भएको कुनै पनि रोगको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान लिन सामर्थ्य राख्नुहुन्छ l भएको खराब culture परिबर्तन गर्नको लागि सबैले प्रश्न सोध्न थाल्ने र आफ्नो अधिकार (बिरामीको अधिकार) प्रयोग गर्न थाल्यो भने मात्र system परिबर्तन गर्न सकिन्छ नत्र पुस्तौंपुस्ता उही चलन रहन्छ l परिबर्तन सजिलो हुँदैन तर परिबर्तन हुनै पर्छ l बिरामी, डाक्टर, हस्पिटल management सबै परिबर्तित हुनु पर्छ l
७. सबै रोगबारे सबै डाक्टरलाई पूर्ण ज्ञान हुँदैन: सुरुमा general practitioner (primary care provider) अर्थात् सबै रोगहरु बारेमा हल्का ज्ञान भएका डाक्टरसंग उपचार गराउने चलन हुन्छ l अधिकाम्स रोगहरु उनीहरुलेनै छिनो फानो गर्छन र उपचार गर्छन l कुनै अलि कडा खाले वा अलि फरक खाले वा बिभिन्न ठुला खाले उपकरणबाट शरीरको भित्रि अंगमा हेरेर उपचार गर्नु पर्ने रोगहरु वा दिर्घ रोगहरु भएको अवस्थामा specialist को मा refer गर्नु पर्ने हुन्छ l यसरी specialist संग उपचार गरेर, उनीहरुको राय लिएर आएपछि पुन पहिलेकै डाक्टरसंग follow up गर्नु पर्ने हुन सक्छ l डाक्टरले आंफ्नो विज्ञता नभएको कुरामा specialist संग consult गरेर उपचार गराउन पनि सक्छन l
श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १९:२९:०३ बजे : प्रकाशित
जनै खटिरा के हो र यसबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौँ। जनै खटिरा एक प्रकारको भाइरल सङ्क्रमण हो। यसलाई पीडादायक समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ। छालामा देखिने यो रोगमा स–साना पानीफोका जस्ता आउने खटिराहरू चिलाउनुका साथै असह्य रूपले दुख्ने गर्दछ। ठेउलाको कारकका रूपमा परिचित भेरिसेला जस्टर नामक भाइरसको सङ्क्रमणले यो रोग लाग्दछ। चिकित्सकको भाषामा यसलाई हर्पिस जस्टर भनेर चिनिन्छ भने नेपालीमा जनै खटिराका नामले परिचित छ।
यो रोगप्रायः एकपटक ठेउला भइसकेका व्यक्तिलाई हुने भएकाले यो प्रौढहरूमा बढ्ता देखिने गरेको छ। यसलाई सामान्य खालको छालाको रोग ठान्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन । शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका बेलामा यसको आक्रमण बढी हुने चिकित्सकहरु बताउने गर्छन् ।
जनै खटिराका प्राकृतिक उपचार
दैनिकरुपमा चिसो पानीले नुहाउने : दैनिक चिसो पानीले नुहाउँदा छाला सफा हुनुका साथै संक्रमण फैलिने जोखिम कम हुन्छ। छालामा भएको दुखाइ तथा पोल्ने समस्यालाई निर्मूल पार्न चिसो पानीले शान्त स्नान गर्दा यसले शरीरलाई शितलता प्रदान गरी पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ। यस्तो अवस्थामा तातो पानी प्रयोग कहिल्यै पनि गर्नुहुँदैन । यसले रगत प्रवाहलाई बढाई छालाको अवस्थालाई खराब बनाउन सक्छ।
चिसो पानीको स्प्रे वा कपडाको प्रयोग : खटिरा सम्बन्धित पीडा र चिलाउने समस्या हटाउन नुहाउनुबाहेक एक चिसो पानीको स्प्रे हरदम आफ्नो साथमा राखेर छिन् छिनमा चिलाएको स्थानमा स्प्रे गर्नुहोस् । यसका साथै चिसो पानीमा कपडा भिजाइ निचोरेर आफ्नो छालामा प्रयोग गर्नुहोस् ।
बेकिङ सोडा र कोर्नस्टार्चको पेस्ट : खटिराको दुखाइ र चिलाउने समस्याबाट स्वाभाविकरूपमा राहत पाउन कोर्नस्टार्च वा बेकिङ सोडालाई पानीमा मिलाई यसको पेस्ट तयार पार्नुहोस् र यस मिश्रण वा पेस्टलाई संक्रमण भएको छालामा लगाउनुहोस् । उक्त पेस्ट लगाइसकेको १० देखि १५ मिनेटमा चिसो पानी पखाल्नुहोस् । आवस्यकताअनुसार यसलाई दिनमा २ देखि ४ पटकसम्म गर्न सकिन्छ ।
आहारबाट उपचार : एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीले खटिरालाई झन् खतरा बनाउन सक्छ। आहारमा परिवर्तनले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पारी खटिरालाई शरीरको अन्य भागहरुमा फैलनबाट रोक्छ । खटिरा भएका बेला केहि खानाको आहारले रोगप्रति लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीको कार्यलाई सुधार गर्न सकिन्छ।
खटिरा भएको बेला के खाने ?
खटिरा भएको बेला खानामा भिटामिन ए, बी–१२, सी, र ई, र एमिनो एसिड लाइसाइन भएका खानालाई बढी जोड दिनुपर्दछ। खटिरा भएका बेला सुन्तला, पहेंलो फल, हरियो तरकारी तथा सागसब्जी, खसीको मासु, अण्डा, कुखुराको मासु, माछा, दुध, फलफूल, टमाटर र पालुङ्गो आदि खाने कुरा खान सकिन्छ।
चिनीको उच्च मात्रा भएको खानेकुरा, चकलेट, जिलेटिन र बदाम खानु हुँदैन। यसैगरी, उच्च कार्बोहाइड्रेट भएका खाना र बोसो भएको खानेकुराहरु सेवन गर्नुहँुदैन।
श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १९:२२:५३ बजे : प्रकाशित